ဘယ်သူလူဆိုးလဲ | Mg Ogga's Notes
Mg Ogga / March 12, 2010
လောကမှာ လူမိုက်ရှိသလို လူုလိမ္မာ ပညာရှိဆိုတာလဲ ရှိပါတယ်။ လူမိုက်ဆိုတာ ကောင်း၏ ဆိုး၏ကိုမသိ ကောင်းတာမလုပ် ဆိုးတာလုပ်တဲ့သူ ပညာရှိဆိုတာ ကောင်း၏ ဆိုး၏ သိပြီးကောင်းတာ လုပ်တဲ့ သူလို့ ဓမ္မအသုံးအရ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတလေတော့ လောကသဘော လက်ခံထားကြတာရယ် ဓမ္မသဘောရယ် ကွဲလွဲနေသလားလို့ကြာတော့ ခံစားမိတယ်။ ဒီလိုခံစား ဖြစ်သွားအောင် လက်တွေ့ လူမှုဘ၀ကြီးက ပြောနေသလိုပဲ ဒီပုံပြင်လေးက အသိဥာဏ်ပေးလို့ ဝေမျှ ဖောက်သည်ချလိုက်သဗျ။
ဟိုးတိုတိုတုန်းက ဘာပြည်ကြီးက ညာသူဌေးကြီးတစ်ဦးဆီမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အခိုင်းအစေ သူဆင်းရဲ အလုပ်သမားလေး တစ်ယောက်ရှိသတဲ့ အဲဒီ သူဆင်းရဲလေးဟာ ညာသူဌေးကြီးပိုင်တဲ့ ခြံဝိုင်းထဲမှာ ရွှံ့နဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ သက်ကယ်မိုး တဲလေးမှာနေထိုင်ရပြီး အလွန်ဆင်းရဲလှသူဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ အဲဒီအလုပ်သမားရဲ့တဲအနားကို ပညာရှိဆိုသူတစ်ဦး ရောက်လာပါတယ်။ ဒီအခါ အလုပ်သမားက သူ့ဘ၀ဆင်းရဲ နုံချာပုံတွေ၊ အလုပ်ကို ပင်ပန်းကြီးစွာ လုပ်ရပေမဲ့ မ၀ရေစာ စားရပြီး သူဌေးက ဖိနိုပ်ပုံတေါကို ဒီပညာရှိကိုပြောပြလေ၏။ ပညာရှိကြီးက အလုပ်သမားသူဆင်းရဲ ရဲ့ စကားတွေ နားထောင်ပေးတယ် နောက်ပြီး `တစ်နေ့တော့ အခြေအနေ ကောင်းလာမှာပေါ့ကွာ´ လို့ပြောပြီး ထွက်သွားလေတယ်။
နောက်တစ်နေ့ အစေခံအလုပ်သမားရဲ့အိမ်ကို လူမိုက်တစ်ယောက် လာလည်လေတယ်။ ဒီအလုပ်သမား သူ့ဘ၀ဆင်းရဲ နုံချာပုံတွေ၊ အလုပ်ကို ပင်ပန်းကြီးစွာ လုပ်ရပေမဲ့ မ၀ရေစာ စားရပြီး သူဌေးက ဖိနိုပ်ပုံတွေကို ကိုပြောပြတယ်။ `၀တ်တော့လည်း မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ အစုပ်စုပ်အပြတ်ပြတ် နေတော့လည်း ကြည့်လေ ၁၀ပေပတ်လည် တဲထဲမှာ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်းနေရတာ ၀င်ပေါက်တံခါးကလည်း ကျဉ်းကျဉ်းလေး´
လူမိုက်က `ဟုတ်လား ခင်ဗျားရဲ့ သူဌေးက အတော်လူမဆန်တာပဲ ဒီအတိုင်း ငုံမခံနဲ့လေ တုံပြန်ရမယ်´ (ထိုအချိန်က ILO မပေါ်သေးဟုမှတ် ဤကားစကားချပ်)
သူဆင်းရဲက ဆက်ပြောသည် `ပြတင်းပေါက်ဆိုလည်း တစ်ပေါက်မှမရှိ အိမ်ထဲမှာမှောင်ပြီး မွန်းကျပ်လွန်းတယ် ဘ၀ကြီးကိုက ဆိုးပါတယ်ဗျာတဲ့´
ဒီအခါ လူမိုက်က အနားမှာ တွေ့တဲ့ တူရွှင်းတစ်ချောင်းကိုကိုင်ပြီး `ဒါကတော့ မခက်ပါဘူးဗျာ´ဆိုပြီး ရွှံနံရံတစ်နေရာကို တူရွှင်းနဲ့ တူးဆွ ဖောက်လေတော့သည်။ ဒါပေမယ့် ပြတင်းပေါက်လေးပေါက် ဖောက်မပြီးခင် အစေခံအလုပ်သမားက `လာကြပါအုံးဗျို့ လူတစ်ယောက် သူဌေးမင်းက ကျွန်တော်ကို နေခွင့်ပေးထားတဲ့ အိမ်ကိုဖျက်ပစ်နေပါတယ်´ လို့ အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းလေသည်။
ဒီအခါမှာ သူဌေးတပည့်တွေ ရောက်လာပြီး လူမိုက်ကို ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်။ ဒီနောက်သူဌေးကြီးကိုယ်တိုင် ရောက်လာပြီး ဆင်းရဲသားအစေခံလေးက သူဆီလူမိုက်တစ်ယောက် ရောက်လာပြီး သူ့အိမ်ကို ပျက်စီးလို့ သူဌေးတအည့်တွေကို အကူအညီတောင်းရခြင်းဖြစ်ပါ ဟု သံတော်ဦးတင် အစီရင်ခံလေသည်။
ထိုအချိန်မှာ သူဌေးကြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွန့်ရုံပြုံး၍ အစေခံ ဆင်ရဲသားကို `မင်းတော်တယ်လို့´ ပြောလေသည်။
နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာ ပညာရှိဆိုသူဟာ သူဆင်းရဲ ရဲ့ အိမ်ရှေ့ ရောက်လာပါတယ်။ ဒီအခါမှာ သူဆင်းရဲ က `ခင်ဗျားက ပညာရှိကြီးကို ပညာရှိပီသပါတယ်ဗျာ ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်း အခြေအနေ ကောင်းလာ မယ်ဆိုတာလေ အဲဒါ ဟုတ်တယ်သိလား မနေ့က သူဌေးက ကျွန်တော်ကို မင်းတော်တယ်လို့ ချီးမွမ်းသွားတယ်ဗျ´။
လူမိုက် ခမျာတော့ အင်း………………….
p.s: ကျွန်တော်နှင့် အတူ မိုက်ဖော်မိုက်ဖက်များအတွက် ဂုဏ်ပြုရေးသားပါသည်။
March 12, 2010 in ဟာသသရော်စာ.
2 thoughts on “ဘယ်သူလူဆိုးလဲ”
သန့် ဇင် says:
ဒါပေမယ့်ငါသာဆိုရင်တော့ဒီလူမိုက်လိုတော့လုပ်မှာမဟုတ်ဖူး။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သူဆင်းရဲကိုစည်းရုံးမယ်။
ငါလည်း ဒီလိုချည်းတော့ဘယ်လုပ်ပမလဲ သဘောပြော ပုံပြင်ဆရာရဲ့